Imidlalo Yebhola Lezinyawo | Amawebhu we-PC ne-Android ▷ 🥇 Emulator.online
Imidlalo yebhola. Umdlalo omuhle uyaqhubeka nokuheha abathanda, ngokwanda imidlalo ebonakalayo egameni lakhe. Uzokwazi ukufeza ubuningi bamathuba wokudlala umdlalo wakho owuthandayo.
Lo mdlalo kanjalo ihehe phakathi kwabancane nabadala ithola inani elikhulu esikhaleni esibonakalayo. Lapho kufezeka khona iphupho lakho lokuba ngumdlali ovelele. Kepha uzofinyelela nezinketho uma ungomunye walabo abaphupha ngokwenza iqembu lakho nokuhlelela ukudlala.
Into ebalulekile ukuthi uyayijabulela kusuka esikhaleni noma kudivayisi okhetha umuzwa womdlalo omuhle.
Ungathanda ukwazi imidlalo yamahhala yebhola likhululekile? Woza uzothokozela isasasa le- umdlalo ongcono kakhulu emhlabeni! Lapha uzothola izinketho ezinhle kakhulu ongazidlala kusuka kunoma iyiphi ikhompyutha noma idivayisi yeselula.
Ngabe unesibindi sokwazi i- imidlalo yebhola lezinyawo ehamba phambili?
Imidlalo engcono kakhulu yebhola lezinyawo ongayilanda
Uma ufuna ukwenza isipiliyoni sebhola likhulu kakhulu, unenketho yokwenza i-ascargas. Yize ukutholakala kwemidlalo yamahhala kungekhulu kangako, uma ungafinyelela eminye ethize ezokwenza udlidlizele ngokomzwelo.
Okunye okubi ongakuthola ukuthi abaningi banokuthenga okuhlanganisiwe ngenkathi ukutholakala kwabo kungenamkhawulo. Lokhu kusho ukuthi ungazilanda futhi dlala mahhala.
Kodwa-ke, kwesinye isikhathi kuzofanele ukhokhe ukuze ukwazi ukuthuthuka futhi ujabulele ezinye izinzuzo. Dlala ibhola futhi ujabule nabangani bakho, ungaphuthelwa ithuba lokuba nesikhathi esihle kakhulu.
Phakathi kwezinzuzo ongazizuza ukuthi uzokwazi ukudlala imidlalo yebhola online nabanye abadlali. Ungabona futhi ukufana kwakho, hlela imidlalo yakhoNgale ndlela, uhlola futhi uqinise uhlangothi lwakho lokuphatha.
Thola amaphuzu abuthaka ethimba lakho eliphikisanayo futhi uzohlaziya kangcono amasu akho ngokushesha lapho ubhekana nawo.
I-FIFA izinkulungwane ezimbili neshumi nesishiyagalombili-2019
I-FIFA ngokusobala ihamba phambili futhi ayidingi ikhadi lebhizinisi. Ngaso sonke isikhathi ukulungiselelwa kudlula okulindelwe. Lokhu kubhekwa njengenye ye- kangcono ama-simulators ebhola, ibaluleke kakhulu futhi adlalwa ezikhathini zamuva.
Ngenxa yombhali wayo i-Electronics Arts - Ea Sport, isipiliyoni sebhola le-3D ozohlala kulo siyoba ngokoqobo impela. Uzothola mahhala uku I-PC, i-PS4, i-Xbox One, Shintsha. Woza uzokuthokozela okwenzekile, iFIFA izokwenza uhlale ubambekile.
Inendawo enkulu yokuyiqondisa, okunikeza ukulawula okuphelele kwayo. Lonke udumo lwale simulator lubangelwa i- ikhwalithi kanye namaqiniso Yini ekuhlinzekayo. Izinga lezithombe elizivezayo lithuthukisiwe kunguqulo ngayinye liyenza ikhange kakhulu.
Inezinhlu ezisemthethweni zeqembu ngalinye lebhola lezinyawo. Ngaphandle kwe- izinhlaka ezisemthethweni okubaluleke kakhulu, isigaba sikazwelonke nakwamanye amazwe. Izibonelo zazo yiChampion League, iSpanish League, i-English Premier League, i-UEFA Euro Cup.
Okusha okuvezwa ezinsukwini zethu kufaka phakathi ukuthuthuka kwefayela le- ukunyakaza kwangempela kwabadlali. Amakhono omuntu ngamunye adaluliwe anolwazi uma kukhulunywa ngokukhishwa ngokomzimba nokuzivikela.
Ukubukeka komzimba kwabadlali abaningi kuvuselelwe, ukwenza isipiliyoni sakho sibe ngokoqobo ngokwengeziwe. Ngaphezu kwalokhu uphatha amakhono wokulawula ibhola kumabhola ahlukanisiwe. Uzokwazi ukubumba i- amaqhinga acasulayo nawokuzivikela eqenjini lakho
Isistimu yokuthinta esebenzayo ithuthukisiwe ukuyinikeza usizo olukhulu. Uzothola amakhono wabadlali abakhulu abanjengo UMessi, uCristiano Ronaldo, uNeymar phakathi kwabanye. Ngakho-ke awukwazi ukuphuthelwa yisipiliyoni sokudlala ibhola ngalesi simangaliso sangempela sebhola lezinyawo.
IPro Evolution Soccer izinkulungwane ezimbili neshumi nesishiyagalolunye (PES izinkulungwane ezimbili neshumi nesishiyagalolunye) ingeyokuqala imidlalo engcono kakhulu yemidlalo yokududuza yama-simulators ibhola likanobhutshuzwayo. Le simulator eyenziwe yiKonami imahhala kwiMicrosoft Windows, Android, PS ezine, PS ezintathu, Xbox ezingamakhulu amathathu namashumi ayisithupha, iOS, GNU / Linux.
Uma ungomunye walabo abathanda ibhola ngezinga elikhulu, leli yithuba elihle lokuthi uvivinye amakhono akho. Ngalokhu uzokwazi ukunambitha umuzwa wokudlala ibhola ku isikhala sangempela. Lo mdlalo wevidiyo, umbangi osondelene kakhulu weFIFA, uqhubekela phambili ngokwengeziwe ekuthuthukisweni ukuziqhathanisa nomphikisi wakhe.
Iminyaka embalwa iza ukuvela ngekhwalithi enikelwe kubasebenzisi. Namuhla uzokwazi ukubona ukuthi abadlali banokubukeka kwangempela. Ngaphezu kwalokhu, baklanyelwe ukuthwebula izimo zabadlali bangempela, njengokuhamba kwabo (ukuhamba, ukujika, ukukhahlela, ukukhathala nabanye).
Kufaka futhi izinhlaka zangempela, okwenza ikhange ngokwengeziwe. Imidlalo iyasebenza kakhulu futhi izinkundla zithokozela ubuqiniso obukhulu. Uzokwazi ukugada umdlalo ngendlela elula kakhulu futhi enethezekile.
I-PES ngemuva kwesikhathi igcina ubuhle. Ihluzo zigcinwa zisesikhathini futhi ukucwiliswa ozoba nakho emhlabeni webhola kuhlukile. Woza uzokujabulela PES 2019 futhi wenze isipiliyoni sakho sebhola singeqhathaniswe.
Ibhola 3D: Soccer Online
Ibhola 3D yi- platform kuhle impela, lapho uzothola ithuba lokudlala ibhola elihle kwi-3D.
Ilula ukuyisebenzisa futhi uyakwazi ukulawula isenzo ngasinye okufanele senziwe. Amahora azokudlula ujabulela ukudlala okuhle. Ingabe ukhululekile uku IWindows ne-Mac OS X.
Inhlangano yebhola lezinyawo
Lo mdlalo wekhompyutha awufinyeleli ekuthandeni kweFIFA nePES. Ngisho nakule ndlela, iyaqhubeka nokuba yinhle futhi isetshenziswe izinkulungwane nezinkulungwane zabasebenzisi. Ngakho-ke ungakuvumeli ukuthi kungenzeka ukuthi ujabulele i- imizwa yebhola.
Isethulo sayo se-3D sinobuhle obulula kakhulu. Imahhala ngeWindows XNUMX futhi uzokwazi ukuyilanda mahhala.
FIFA Ucingo Soccer
Lo mdlalo webhola likhululekile I-iOS ne-Android. Kuhle ukuchitha isikhathi kunoma iyiphi indawo, ngenkathi ulindile futhi ufuna ukuchitha isikhathi esithile sokuphazamiseka.
Ayinayo ikhwalithi efanayo ncamashi kukhompyutha. Ngale ndlela uzozijabulisa ukuxazulula imidlalo kanye neminye imininingwane yamahhala. Kuyathandwa kakhulu ngabasebenzisi. Ngakho-ke unganqikazi kulokhu okunye ukulayisha ibhola kuselula yakho.
Ngesethulo esilula, siheha abasebenzisi abaningi. Ngalokho uma ungumthandi we ibhola lezinyawo zakudala ungayilanda mahhala.
Uzokwazi ukudlala ukufana, ulungiselele umugqa wakho bese uzuze imiklomelo yemali. Ingabe ukhululekile uku I-Android ne-iPhone.
Kuyinothi langempela ukukwenza uma ungumthandi wokudubula wamaphenalti. Kususelwa ezinhlawulweni futhi kufanele ube namakhono amahle ngeminwe yakho. Uzokwazi dlala online futhi unezimo eziningi zokwenza izinhloso zakho.
Unethuba futhi lokuthi dlala kumaligi amaningi futhi ubeke ama-chips. Iligi inkulu, umklomelo omkhulu ozoba nawo. Njengoba uthuthuka emazingeni, ubunzima buyakuba bukhulu.
Ukukhahlela okokugcina Kukunika ithuba lokudlala nabangani bakho kanye nokulwa nezinhlawulo. Inikeza imidlalo eyingqayizivele ehlala isikhathi esifushane. Lokhu kukuvumela ukuthi uqoqe amaphuzu nemiklomelo ezokusiza ukunqoba amazinga.
Phila isipiliyoni kanye nemizwelo ibhola esiteji elikushukumisela kakhulu. Uma icala lakho lidlula isigwebo, unganqikazi ukufakazela lokho.
Lo mdlalo we ibhola likanobhutshuzwayo online kuncintisana impela futhi kuyajabulisa kakhulu. Isici sabadlali bayo ukuthi babukeka njengopopayi namakhanda abo emikhulu kunemizimba yabo. Inesethulo se-3D esinomfanekiso wabadlali bebhola abaziwa kakhulu ngaleso sikhathi.
Uzokwazi ukuchitha amahora uzijabulisa. Qedela izinselelo lapho kufanele uqhubeke khona imijikelezo eminingi engakhonjwanga. Okuwukuphela kokubi ukuthi ngeke ukwazi ukudlala ngokuqonda nabangane bakho. Ngisho nakule ndlela, yabelana ngomuzwa omnandi i-Head Soccer ezokunikeza wona.
Amawebhusayithi amahle kakhulu wokudlala ibhola mahhala
Kunenqwaba yamakhasi lapho ungadlala khona ibhola mahhala, kepha hhayi ngalinye lawo lithembekile. Ngakho-ke, ngincoma ukuthi wazi okuthile amakhasi athembekile futhi asheshayo lapho uzokwazi khona ukudlala ibhola ngaphandle kokuphazamiseka. Kodwa-ke, ukusetshenziswa kokufana ncamashi kungaphansi kwesibopho sakho esigcwele.
Manje nginethulela amakhasi athile azokuvumela ukuthi udlale ibhola futhi ube nesikhathi esihle.
Le webhusayithi uzothola ifayela le- okuhlukahlukene ngakunye kwalokhu kunambitheka. Uzokwazi ukwenza imidlalo ezomaka umlando wakho njengomdlali webhola. Gqoka izicathulo zakho ezibonakalayo bese ukhahlela unyawo lwebhola njengochwepheshe.
Ajabule sebenzisa isibalo somdlali wakho omthandayo futhi wenze imidlalo evusa amadlingozi. Noma uma umane ufuna ukuthatha izinhlawulo ungakwenza futhi.
Ubeka inkundla nabadlali. Kusukela ezimotweni ezizenza abadlali futhi zishaye amagoli, kuya yokufunda. Leli khasi lenzelwe unyaka ngamunye.
Kuyo uzothola izibalo ozithandayo ze- amahlaya adlala ibhola, kwizibalo ezingokoqobo zabashayi magoli bakho obathandayo.
Noma ngabe ukhetha hlobo luni, ngiyakuqinisekisa ukuthi uzoba nesikhathi esihle kakhulu ukudlala mahhala umdlalo wakho owuthandayo.
Le webhusayithi izokuvumela ukuthi udlale online ngendlela enobungcweti futhi enokuncintisana okukhulu, mahhala ngokuphelele. Uzokwazi ukudlala ngokumelene nabadlali namaqembu avela kuwo wonke umhlaba. Yenza ubungani futhi ubambe iqhaza kumaligi nakumqhudelwano ngemiklomelo.
Ukudlala kufanele ufake ikhasi bese bhalisa ngemininingwane yakho bese udala umsebenzisi. Khetha ulimi lwezwe lakini, konke lokhu mahhala. Kufanele uqinisekise umsebenzisi ngokungena ku-imeyili yakho.
Ama-Footballsuperstars iyahambisana IWindows XP neWindows 7 / 8 / 10. Ungadlala noma kunini lapho ufuna khona, udinga ukufaka igama lakho lomsebenzisi ekhasini. Uzokhululeka ngempumelelo.
Qondisa isidlali sakho bese usithatha kusuka kumaligi amancane kube inkanyezi yebhola lezinyawo wesigaba samazwe omhlaba. Uzokwazi ukumqeqesha futhi ngale ndlela uthole amakhono wokuwina imidlalo eminingi. Uzokujabulela ukuthokozela kokudlala, ukuphumelela ngisho nokuletha izingxoxo ezizokuvumela ukuthi ukhulise izinga lakho lodumo.
Kuleli khasi uzothola lapho uchitha khona isikhathi esimnandi nesijabulisayo udlala iFast Soccer. Uzodlala mahhala ngokuphelele.
Bhala phansi abaningi ngangokunokwenzeka bese ushaya iqembu eliphikisayo. Ingabe elula ukudlala futhi ilungele izingane nentsha. Kodwa-ke, uma ungumuntu omdala futhi ufuna ukuzijabulisa isikhashana, unganqikazi ukungena kulo mkhakha.
Qala ukukhahlela ibhola manje amaphuzu wokushaya ukuze uthole indebe.
Lesi sikhala esibonakalayo singenye yezindlela ezingcono kakhulu zokuba umphathi weqembu lakho lebhola eliyintandokazi. Bhalisa futhi udlale ngaphandle kwezindleko, kepha uma ufuna ukujabulela ezinye izinzuzo uzokwazi ukukhokha ukuze uzithole. Dlala nganoma yisiphi isiphequluli, futhi ujabulele injabulo yebhola likanobhutshuzwayo.
Leli khasi lizokwenza uzizwe njengomphathi weqiniso, uzokwazi ukukhetha iqembu lakho olithandayo. Futhi khetha ifayela le- abadlali abaphezulu we planethi.
Qinisa iqembu lakho, uthathe isinqumo ngokuqondanisa futhi setha amaqhinga akho. Ngalesi esimnandi, yabelana nabangani bakho, ubaphonsele inselelo futhi ujoyine amaligi abo futhi ufakazele ukuthi ungcono kakhulu!
Phila umuzwa omuhle kakhulu womdlalo weSiphathi seSoka
Namuhla, amapulatifomu wegeyimu yevidiyo aphethwe yi Umphathi webhola. Le midlalo yebhola likanobhutshuzwayo iheha kakhulu njengoba ingqikithi ikubaphathi bangaphandle beqembu. Ukwenza kuqondakale kakhudlwana uphatha ama-lineups, amaqhinga wegeyimu, Ukukhetha kwabadlali, phakathi kwabanye abaningi.
Lezi zici zibaluleke kakhulu kumphathi webhola. Gqoka isikhumba se- umqeqeshi nomphathi webhola lezinyawo futhi woza uzokujabulela lokhu kudlala okumnandi.
Uma ungokoqobo umthandi webholaImpela uthwala umoya womqeqeshi ngaphakathi. Ngakho-ke qhubeka ulande iMenenja yeBhola lezinyawo izinkulungwane ezimbili neshumi nesishiyagalolunye. Lo mdlalo omnandi uthathwa njengongcono kakhulu esigabeni Sabaphathi.
Ayishisi ngemininingwane yokuphathwa ngokulandela imodeli yama-greats futhi ikwenze uphile isipiliyoni esikhulu.
Phila umuzwa wokwenza i ukuqondanisa namaqhinga eqenjini lakho olithandayo. Ngaphandle kwalokhu, uzokwazi ukuzwa ukufana okunamaqiniso okuthi uzozizwa usesiteji ngenxa yokuthuthuka kokulingiswa kwebhola.
Ukuthembela kuyo kufanele ukhokhe, ngoba ayikho mahhala ngaphandle kwezindleko. Kodwa uma usuyilanda, uzokwazi ukuyijabulela Umphathi webhola uTouch kumahhala ku-Windows, Mac naku-Linux.
Kulesi mdlalo uzokwazi ancintisane kumaligi emazweni angaphezu kwamashumi amahlanu, khetha emakilabhini angaphezu kwezinkulungwane ezimbili. Uzokwazi nokukhetha kubadlali abangaphezu kwamakhulu ayisithupha. Yenza umsebenzi ngamunye wemenenja enkulu ngokulawula ithimba lakho, izikhathi zokuqeqesha, abadlali, ukudluliselwa, izimali, abasebenzi.
Uhlobo oluthuthukisiwe oluyizinkulungwane ezimbili neshumi nesishiyagalolunye lwalesi saga lufaka izindaba ezifana nokuthi uzokwazi dala amandla phakathi kwabadlali. Futhi hlanganisa ukudala imifaniswano, uhlole abadlali ngokuseduze, ngokuningiliziwe.
Ngaphandle kwalokhu inentuthuko enkulu ku- amaqhinga, unemininingwane ekutshela ukuthi isu lakho liyasebenza yini. Ubuhlakani bokufakelwa obukhethelwe ukudluliswa buthuthukiswe ngezinga elikhulu. Manje usulayishe ngokweqile izingcaphuno, amakhomishini nezigaba ezisondelene kakhulu neqiniso.
Awungeke uphuthelwe yithuba loku bukhoma ibhola njengoba ufuna kulo mdlalo omuhle.
Lo mdlalo omnandi ususelwa ku- Okwakudala kwamakhompiyutha ebhola lapho okungenzeka uchithe isikhathi esiningi uzijabulisa. Kodwa-ke, ithuthukisiwe ngokufakwa kwabaphathi. Ngiyakuqinisekisa ukuthi uzoyithanda ngokusizakala kwayo nokuphatha okulula.
Gcina lokhu engqondweni, ikakhulukazi uma uthola umuzwa wokuthi iMenenja yeBhola lezinyawo inemininingwane ephelele ngemininingwane yabaphathi. Kuza kuvuselelwe ngokuphelele futhi kukhululekile ukukwenza PC-MAC, Ithebhulethi, namanye amadivayisi eselula.
Ngalo mdlalo omuhle kakhulu wokuphatha uzokwazi ukulawula ifayili lakho le- ukuqeqeshwa, ukusayinwa, imali phakathi kwabanye abaningi. Khetha abadlali abahle kakhulu nabo bonke abanye abasebenzi bakho, wakhe iqembu lakho ulithathe liye phezulu.
Uye imidlalo yendabuko kanye nama-quirks athuthukisiwe. Amanye awo angamaligi omhlaba wonke ayisishiyagalolunye, abadlali abangaphezu kwamashumi amabili, amaqembu angaphezu kwenkulungwane. Uzokwazi ukunweba izinkundla zezemidlalo nezinye izikhala, njengokumaketha. Inesistimu yamasu athuthukile nezinye izici ezintsha.
Ungayeki ukuphila ngokuhlangenwe nakho kokuba umphathi omkhulu webhola lezinyawo futhi ube nesikhathi esihle sokwenza.
Umphathi weSoka 2018
Lo mdlalo okhulelwe iSoccer Manager Ltd kuyindlela enhle yokuqala i-adventure njengomphathi weqembu. Kumahhala emsamo I-Microsoft Windows ne-Android.
Ngayo ungaphatha okwakho iqembu lebhola, ukulawula ukuphathwa kwezomnotho nezemidlalo. Yiba ngumphathi wezemidlalo omuhle kakhulu futhi usize ukuthuthukisa ithimba lakho ukuze ulibhekise phezulu.
Izimfanelo ezinhle ezinalesi simulator zikhonjwa nge-interface engokwemvelo kakhulu. Ine- amalayisense asemthethweni wamaqembu. Unamaqembu angaphezu kwamakhulu ayisishiyagalombili avela emazweni angaphezu kwamashumi amathathu nanhlanu kanye nokuma okuhle kwabadlali. Ngaphezu kwalokhu uzokwazi ukubala amaligi asemthethweni nezinkomishi.
Umphathi weSoka 2018 ikunikeza ithuba lokuphatha konke okuphathelene neqembu lebhola lezinyawo eliphezulu. Umsebenzi wakho kuzoba ukuvumelanisa zonke izici ezibalulekile ukuze iqembu lakho lihambe phambili. Kusukela ekuthuthukisweni kwenkundla, kudlula izindlela zokuziqeqesha zabadlali bakho, amasu phakathi kwabanye abaningi.
Yenzelwe labo abanentshisekelo yokuphathwa kwezemidlalo, isebenzisa ngokunenzuzo ukuphatha ingxenye ngayinye yezokuphatha nezemidlalo yeqembu. Woza uzokujabulela lokhu ibhola lezinyawo Simulator ukuthi ngeke uzisole.
Kuyinto isicelo samahhala se- Android, ngesitayela semenenja yemidlalo yebhola lezinyawo iyakhanga impela. Ngaphandle kokuthi inokwaziswa okuningi, kufanele uzinikeze ithuba lokusebenzisa. Lolu hlelo lokusebenza kukunika ithuba ukudlala nabangani bakho.
Unemincintiswano eyisithupha yamahhala ongayidlala. On indwangu Champion League, I-Spanish League, I-UK Premier League, I-French League.
Kunezinzuzo eziningi kunokubi onakho lapho ulanda uhlelo lokusebenza. Sebenzisa futhi udlale nabangani bakho ngokwenza ifomethi ye- umdlalo webhola kuhle
Ekugcineni, njengoba uzokwazisa, unezinketho ezahlukahlukene zokwenza umuzwa omnandi ku- imidlalo yebhola lezinyawo ebonakalayo. Umdlalo ngamunye webhola lezinyawo ungumkhuba ngamunye. Qalisa ukudala izindlela zakho nokunambitha ekusebenziseni.
Yabelana nabangani bakho nomndeni wakho ngokudlala umdlalo owuthandayo. Sebenzisa ngokunenzuzo ukudala nokuqondisa iqembu lakho lebhola bese uveza imibono yakho ngamasu wokuqondanisa.
Intshiseko, phila injabulo yebhola lezinyawo eduze kakhulu lolu hlu lwe imidlalo yebhola lezinyawo ehamba phambili. Yimuphi okhethe ukuqala?